4 Überzeugende Taktik Zur Bewältigung Der PPC-Werbeherausforderungen - Uchwepheshe we-Semalt Anliegen
Pay-Per-Chofoza (PPC) Werbung kann aufgrund vieler Ukwaziswa nge-boss. Zum Beispiel könnte die Konkurrenz in Ihrer Nische zu steif sein, noma der Konkurrent is a isgergerstet for die Nische. Ngabe u-Budgetzuweisung we-PPC-Marketingkampagne isingeniso, Iwebhusayithi ye-Website kangaka, ngakho-ke - comforser tire reviews. Ngaphandle kwe-PPC-Herausforderungen, qhafaza umuntu oneminyaka engu-17 ubudala, noma iyiphi inthanethi, noma iyiphi inthanethi.
uRyan Johnson, umphathi omkhulu wezokuthengisa von I-Semalt , i-bietet ye-Taketen, i-Hernus ne-Herausforderung i-Herausforderung i-Gewinnen können, enikeziwe yi-konfrontiert:
Ukumaketha kabusha-Lalela for Suchanzeigen (RLSAs)
Uma ufuna ukuthenga, bheka Problem eines kleinen Izimali zibeheben. I-Wenn Sie ein kleines I-Budget haben, ingu-schwierig, SEO-Ergebnisse nge-Signifikantem Wert zu erhalten. I-Rückgaberate isingeniswe yi-ROI. Ngabe i-RLSAs ingabe i-Kunden gezielt ansprechen, noma i-Ihren Link i-Geklickt haben, ungene kwi-Geld konvertiert haben. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, bheka u-Annahme, bese uchofoza I-Interesse i-Proxy, bese ukhetha Kunden bleiben. I-Stuttik gehen fast 70% yokuhamba Einkaufskörbe nicht weiter zum Einkauf. Esinye isingeniso, Geld für Kunden, ukufelwa kanye neKauf uthole haben, zu verschwenden..Ngabe usuke uthanda, ungenelele Kunden einen neuen Kunden zu kaufen.
Leli qhinga lixazulula inkinga yokuguquguquka okuncane noma okungekho, ikakhulukazi ngenxa yobumpofu amakhasi okufika. Ukuhlola imiklamo eminingi kungakusiza ukuthi ubone ukuthi ubani owenza impikiswano enkulu ekuguqulweni. Ukulandela Ukubuyekezwa kukaJanuwari 2017, i-algorithm ye-Google ihlose ubuhlobo beselula. Lokhu kubuyekezwa kusho ukuthi ukusetshenziswa kwe-SEO kufanele kugxile ekwenzeni amawebhusayithi weselula. Ukulandela ukutholakala kokuphequlula kwe-smartphone, izici ezifana nokuchofoza ukushaya ucingo kungenza isayithi lakho liguqulwe njengalokhu lingakaze lize.Ngokwezibalo, izingcingo ezingaphezu kuka-162 billion zizokwenziwa kumabhizinisi asebenzisa ama-Smartphones ekupheleni konyaka.
Ukudala uhlu lwamagama angukhiye elingalungile
Leli qhinga lixazulula inselele yokuthola ithrafikhi engadingekile. Kuicala le-PPC, ukuchofoza, okungaguquki ngokuvamile kuyinkunkuma nemali. Kunoma iyiphi indlela ye-e-commerce, ukuthola abantu abangabasiza kuwebhusayithi yakho yinto yokugcina oyifunayo. Ngaphezu kwalokho, lo mgwaqo unganciphisa ukubaluleka kokuqukethwe kwakho ekusesheniinjini ye-algorithm eyenza yonke inqubo yokuthengisa ye-inthanethi ihluleke. Kumikhakha yemidlalo ebanzi, ungafaka umkhiqizo ongekhouhlu lwakho kodwa luyindawo ye-niche okhangisayo.
Isabelo esiphezulu sokushiya
Leli qhinga lingasiza kakhulu uma ufuna ukushaya umncintiswano wakho. Ngaphakathi yonke ibhizinisi le-inthanethi, ukuthola ukuqonda okuncane kusuka kumphikisi wakho kungaba umqondo omuhle. Kwezinye izimo, iwebhusayithi ingenza kancane noma cha ukuthengiswa nhlobo, ngenxa yokuncintisana komncintiswano. Kulokhu, ungase udinge isu elingeke libalwe kuphela kodwa futhithatha ezinye zezimoto zabo. I-Google inhle ngale ndlela futhi inikeza amagama angukhiye search ongahle aphumelele emncintiswaneni wakho.